April 2022 - San Thitsa
“ရွှေမန္တလေးရဲ့ ပုလဲငွေရောင်ရပ် က ​မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံး ဆိုက်ကားကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူ”
Zawgyi “ရွှေမန္တလေးရဲ့ ပုလဲငွေရောင်ရပ် က ​မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံး ဆိုက်ကားကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူ” မန္တလေး ပုလဲငွေရောင်ရပ် က ​မြန်မာပြည် ပဌမဦးဆုံး ဆိုက္ကား စတင်သူ..ဆိုက္ကား (Side Car) ဆိုတာက စက်မလို လောင်စာဆီမလိုဘဲလူ့အင်အားကို
Zawgyi အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ဇလားဗီးယားငါးကို လုံးဝမစားပါနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်လည်းမျှဝေပေးကြပါဦးနော် ကျွန်တော် တို့ ဇလား ပီးယားငါးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် ။ မွှေးနေတဲ့ ငါးကင်ကို ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ကိုစားတယ် ၊ စားလို့လဲကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်က
Zawgyi ရာသီဥတု အပူချိန် ၄၀’C အထက်ဖြစ်နေလို့ ကားမောင်းသူတိုင်း သတိထားရမဲ့ Aircon အန္တရာယ် (၁) ကားအဲယားကွန်းမဖွင့်မီ စက်နှိုးပြီး ကားမှန်တံခါးများအားလုံး ချထားပါ။ ပြင်ပလေဝင်ပြီး နောက်မှ ကားအဲယားကွန်းကို အနိမ့်ဆုံးမှ စ၍ ဖွင့်ပါ။
၂၁ရာစုရဲ့ အကြွေးတောင်းနည်းအသစ်(အကြွေးယူပြီးပြန်မဆပ်ရင် အဲ့နည်းနဲ့တောင်း)
Zawgyi ၂၁ရာစုရဲ့ အကြွေးတောင်းနည်းအသစ်(အကြွေးယူပြီးပြန်မဆပ်ရင် အဲ့နည်းနဲ့တောင်း) လူတိုင်းသည့် လူ့ဘဝကြီးထဲတွင်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေးများစွာရှိရန်လိုအပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကိုမလိုအပ်သောသူဟူ၍လောကတွင်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့အနေဖြင့်ပိုက်ဆပ်ချေးငှားပြီးပါက အမြန်ဆုံးအကြွေးပြန်ဆပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမထံမှပိုက်ဆံချေးပြီးတစ်နှစ်ကြာအောင်ပြန်မဆပ်သဖြင့် အသံချဲ့စက်ဖြင့်အော်ပြီးပြန်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးထံမှပိုက်ဆံကို တစ်နှစ်ကျော်သော်လည်းပြန်မဆပ်သဖြင့် စိတ်မရှည်တော့ဘဲ အိမ်ရှေ့အထိသွားကာ ငှက်ပျောပွဲလေးပင်ပြင်ဆင်ပြီး
အိမ်မှာ ဒီလိုလေး လုပ်ထားရင် ခြင်ဆေးခွေ လုံးဝ မလိုတော့ဘူး
Zawgyi အိမ်မှာ ဒီလိုလေး လုပ်ထားရင် ခြင်ဆေးခွေ လုံးဝ မလိုတော့ဘူး ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ(ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ) တခြားအိမ်တွေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် ကျွန်တော့်အိမ်တော့အထပ်မြင့်ဆိုပေမယ့် ခြင်အရမ်းလာပါတယ် အပင်တွေကလည်းစိုက်တော့ခြင်ကအောင်းတယ်လေ။ ခြင်ဆေးဖျန်းဖို့ထွန်းဖို့ဆိုရင်လည်း အသက်ရှုကျပ်တတ်လို့ တခါတခါခြင်ရိုက်ဘတ်တံနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားရပါတယ်။ခုတော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ “စပါးလင်” မုန့်ဟင်းခါးထဲထည့်ချက်, ဟင်းထဲထည့်ချက်ဖို့ပဲသိခဲ့တာ ခြင်တကယ်ပြေးမှန်းခုမှသိတာ။ စပါးလင်
ကားပါကင်ထိုးရင်း အရှိန်လွန်ခဲ့ပေမဲ့ အဆောင်တစ်ခုကြောင့် သေကံမရောက်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်….
Zawgyi ကားပါကင်ထိုးရင်း အရှိန်လွန်ခဲ့ပေမဲ့ အဆောင်တစ်ခုကြောင့် သေကံမရောက်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်…. ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ Nonthaburi မြို့မှာရှိတဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခုရဲ့ 4လွှာမှာ ကားပါကင်ထိုးရင်းဖြစ်ခဲ့တာပါ ။သူမရဲ့ကားအသစ်လေးက ကွန်ကရစ်အကာကိုတိုက်မိပြီး အောက်ကိုမပြုတ်ကျအောင် အရှိန်ထိန်းသွားနိုင်ခဲ့တာပါ ။ ကားရဲ့
Zawgyi သင်္ဘောရွက်နဲ့ ဆံပင်ရှည်မြန်အောင်လုပ်မယ် ချစ်တို့ရေဒီနေ့ lrene က မိန်းကလေး အများစု သိချင်နေကြတဲ့ လျှိုဝှက်ချက် တစ်ခုကို ပြောပြမယ်နော် ။ ဒါကတော့ ဆံပင်ရှည် မြန်အောင်လုပ်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး အလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့
ဆန်ပိုးမလာအောင် ဆန်အိုးထဲ ထည့်ထားသင့်တဲ့ အရာများ
Zawgyi ဆန်ပိုးမလာအောင် ဆန်အိုးထဲ ထည့်ထားသင့်တဲ့ အရာများ ဆန်ပိုးဆိုတာ မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ရတဲ့ စာဖိုမှူးတွေ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေအတွက် ရန်သူတွေ ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ဆန်ပိုး ဟာတော်တော် ကိုစိတ်အနှောက်အယှက် ပေးပါတယ်။ သတိမထားလိုက်ပဲ ချက်လိုက်မိရင်လည်း ထမင်းက ပိုးနံ့ကြီးနံနေတတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒါ ကြောင့်
“လျှပ်စစ်စီးနေချိန်မှာ ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ငှက်တွေ ဓာတ်မလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း”
Zawgyi “လျှပ်စစ်စီးနေချိန်မှာ ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ငှက်တွေ ဓာတ်မလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း” လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုတာ လူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်လွန်းတဲ့အရာဖြစ်သလို အရမ်းလည်း အန္တရာယ် များတဲ့အရာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုဖြတ်စီးသွားရင် စက္ကန့်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်သွားနိုင်ပြီး နှလုံးကို
zawgyi ကျောက်သွေးစုပ်တဲ့ သံပခြုပ်ဆိုတာ သံပခြုပ်ဆိုတာ ရေအောက်ကြမ်းပြင်ရှိ ကြက်မောက်သီး နှင့် ပုံစံရော အရွယ်ပါတူသည့် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ မာကျောတဲ့ဆူးချွန်တွေ ဖုံးထားတဲ့ သုံးစင်တီမီတာကနေ တစ်ဆယ် စင်တီမီတာလောက်ထိ ကြက်ဥ အရွယ် ရေငန်သတ္တဝါလေးတွေ ပါ။ ရေချိုနှင့်